बैंकरको सुसाइड नोट : म जिन्दगीदेखि हारेँ | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार बैंकरको सुसाइड नोट : म जिन्दगीदेखि हारेँ
काठमाडौं, ५ असार । देव: विकास बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक रहेका किरण घिमिरेले त्यसरी योजनाबद्ध तरिकाले आत्महत्या गरेका हुन् । आफन्तलाई फोन गरेर आत्महत्या गर्न लागेको जानकारी दिएका घिमिरे २५ जेठको बिहान आफ्नै घरको पंखा राख्ने सिलिङमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे ।
फोनबाट जानकारी पाएका आफन्त आइपुग्दा उनले संसार छाडिसकेका थिए । घिमिरेले आत्महत्या गर्ने जानकारी दिएपछि आफन्त विनीतमणि उपाध्याय र अन्य आफन्त हतारिँदै कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको वडा १३ खहरे सुन्दरीचोकस्थित उनको घरमा पुगे । घिमिरेको कोठामा चुकुल लगाइएको थियो । आफन्तहरू चुकुल फुटाएर कोठाभित्र प्रवेश गरे ।
तर, उनलाई आत्महत्या गर्न नदिने आफन्तको प्रयास व्यर्थ भयो । टेबुलमाथि स्टुल राखेर पंखा राख्ने सिलिङमा झुन्डिएका घिमिरे चिसा भइसकेका थिए । घिमिरेको खल्तीबाट दुई ‘सुसाइड नोट’ बरामद भएका छन् । जसमा उनले आफू जीवनदेखि हारेको उल्लेख गरेका छन् । तर, हार्नुको कारण भने खुलाएका छैनन् । श्रीमती, छोरा, बैंकका हाकिम तथा आफन्तलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको सुसाइड नोटमा उनले संसार छाड्न लागेको भन्दै माफी मागेका छन् ।
‘मैले बैंकबाट राजीनामा दिन्छु भनेको थिएँ,’ बैंकका सिइओ विजयबहादुर श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखका छन्, ‘जीवनदेखि नै राजीनामा दिएँ ।’ सुसाइड नोटमा बैंकका केही कर्जाबारे उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आफन्त निलम दाइलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘म हारेँ जिन्दगीदेखि, बहिनी र भान्जाहरूको अभिभावककत्व लिइदिनू ।’
छोरालाई नेपाल नफर्किन र राम्रोसँग पढ्न भनेका छन् । श्रीमतीलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न बैंकमा रहेको सेयरको हिसाबकिताब उल्लेख गरेका छन् । आफन्तका अनुसार उनी केही महिनायता डिप्रेसनमा थिए । त्यसको औषधिसमेत सेवन गर्दै आएका थिए । २५ जेठमा श्रीमती कार्यालय जान घरबाट निस्किए पनि उनी एक छिनपछि जाने भन्दै घरमै बसेका थिए । उनले पौने १० बजेको समयमा आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको श्रीमती पनि सोही बैंकमा शाखा प्रबन्धक छिन् ।
बैंकरको सुसाइड नोट जस्ताको तस्तै:
Dear kalu, Sanu and Bhai I have tried to keep u always happy and took all the pressure on my head. how how I am fed up with my life and leaving you inadifficult situation. Sorry Sanu, u didn’t have to come to Nepal because u have to complete the study. Nanu and Bhai are now your responsibility, Bhai please you read hard sorry.
मेरो केही किरिया कर्म गर्नुपर्दैन । आफ्नो पैसा लिनू र काम गर्नू । मैले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा तिर्नु छैन । प्रद्युम्न मामाको ३८, सिटौला सरको पाँचबाहेक व्यक्तिगत रूपमा तिर्नु छैन । केशव भट्टराईसँगको घरको बाँकी पैसा कागज गरेबमोजिम लिनू र व्यवहार मिलाउनू । सेयरहरू ट्रान्सफर गर्नू । नवीन भान्जाको देवस् विकास बैंकको दुई हजार ६ सय कित्ता छ । डिम्याट गर्न लगाएर बेचे हुन्छ ।
सिटिजन्स् बैंकमा मेरो नाममा प्रमोटर सेयर छ । मञ्जुश्री र अरनिको बैंकमा नीलम दाइको नाममा छ । सुप्रिममा पनि कालुको नाममा छ, प्रमाणपत्र छैन । सिनर्जी फाइनान्समा कालुको नाममा छ । प्रमाणपत्र हराएको छ । अरू त कालुलाई थाहा छ । सिभिल बैंकको कालुकै नाममा छ, सानिमा बैंकको पनि छ । १२०० कित्ता नीरासाग लिनुपर्ने, त्यो युरो सेभिङ एन्ड क्रेडिट ठमेलमा दुई लाख लिएर राखेको छ । त्यो बेचेर तिर्नू र बाँकी पैसा चलाउँनु ।मेरो अब काम छैन, माफ गर ।
प्रेमीले धोका दिएपछि आत्महत्या
धादिङ घर भई अहिले काठमाडौंको लाजिम्पाट बस्दै आएकी २३ वर्षीया सिर्जना मगर केही वर्षयता एक युवकसँग प्रेमसम्बन्धमा थिइन् । तर, उनको प्रेम सम्बन्धमा बिस्तारै दरार आयो । शारीरिक रूपमा कमजोर उनलाई त्यही कारण प्रेमीले बिहे गर्न नसक्ने बताए । प्रेममा धोका पाएपछि सिर्जनाले २४ जेठमा आफ्नै डेरामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । अनुसन्धानका क्रममा उनको आत्महत्याको प्रमुख कारण प्रेममा धोका नै देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर, प्रहरीले उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने प्रेमीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेन । कारण, नेपालमा आत्महत्यासम्बन्धी कानुन नै छैन ।
श्रीमतीका कारण आत्महत्या
३२ वर्षीय विनोदराज शिवाकोटी संगीत क्षेत्रमा संघर्षरत थिए । केही गीत रेकर्ड गराइसकेका उनले पारिवारिक तनावका कारण गीत–संगीतमा राम्ररी ध्यान दिन पाएका थिएनन् । पहिली श्रीमतीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएपछि दोस्रो बिहे गरे । तर, दोस्रो बिहे पनि सफल हुन नसकेपछि त्यही पीडामा उनले आत्महत्याको बाटो रोजे । १२ वैशाखमा नयाँबजारको भगवती पोखरी नजिकै डेरा गरी बसेका उनले डेरामै झुन्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीेले जनाएको छ । धेरैजसो आत्महत्याका घटना पारिवारिक तनावका कारण हुने गरेको बताइएको छ । खासगरी श्रीमान् र परिवारसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि महिलाले आत्महत्या गरेका घटना धेरै छन् । यस घटनामा भने श्रीमान्ले आत्महत्या गरे ।
रोजगारी नपाएपछि आत्महत्या
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण २० वर्षीय अनिल लामा वैदेशिक राजगारीमा गए । तर ‘अभागी खप्पर, जता गए पनि ठक्कर’ भनेझैँ वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि उनको भाग्य खुलेन । सोचेअनुसार कमाउन नसकेपछि दुई महिनाअघि विदेशबाट फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि काम खोज्दै काठमाडौंका गल्ली निकै चहारे । तर, कहीँ पनि काम नपाएपछि उनी तनावमा थिए । ठमेलनजिकै डेरा लिएर बसेका उनको डेरामा केही दिनयता गाउँबाट बुबा पनि आएका थिए ।
विहीबार बेलुकी सँगै खानपिन गरेर अनिल अर्को कोठामा सुतेका थिए । तर, उनी बिहान मृत अवस्थामा भेटिए । दराजको ह्यान्डलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका डिएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले बताए ।
अबेरसम्म पनि ढोका नखुलेपछि घरमा बस्नेहरूले ताला फुटाएर हेर्दा उनी मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । केही समययता डिप्रेसनको लक्षण देखिएका उनले मदिरा पिएको वेला आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने प्रहरी आशंका छ ।